Cabañuelas, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan, badanaa miyay saxanyihiin? | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Saadaalin
Maanta waxaan ka hadlaynaa qaab saadaasha saadaasha hawada oo si ballaaran looga adeegsado dhulka miyiga ah taasna aad ayey u sii kordheysaa. Waxay ku saabsan tahay cabañuelas. Dadka ku soo koray magaalada, fikraddan ayaa ah mid aan la garanayn. Si kastaba ha noqotee, kuwa ku nool ama ku noolaa baadiyaha, waa eray si ballaaran loo adeegsado bisha ugu horreysa sanadka. Waana inay tahay qaabab kala duwan oo ka caawiya saadaasha saadaasha hawada ee sanadka.
Cabañuelas waa la sii adeegsanayaa maanta oo waxay noqoneysaa mid marba marka ka dambeysa guuleysata. Ma dooneysaa inaad ogaato sida loo sameeyay iyo maxay saadaasha sanadkaan 2018?
1 Asalka cabañuelas
2 Astaamaha iyo qaabka saadaasha
3 Cabañuelas bishii Agoosto
4 Saadaalinta Cabañuelas ee 2018
5 Cabañuelas ma runbaa?
Cabañuelas waxaa laga isticmaalaa koonfurta Spain iyo Ameerika. Asalkiisu wuxuu ka yimid Baabuloontii hore. Ilbaxnimada reer Mexico waxay aqoontani ku qaadanaysay Mayaan. Labada jadwalba waxay ka kooban yihiin 18 bilood iyo 20 maalmood. Inta lagu jiro 18-ka maalmood ee ugu horreeya bisha Janaayo, bilaha sannadka iyo labada maalmood ee haray ee ifafaalaha kale ayaa la saadaalinayaa. 19-ka Janaayo waxaa loo isticmaalaa in la saadaaliyo xilliga xagaaga iyo kan 20aad ee xilliga qaboobaha.
Way suurto gashay in la xaqiijiyo xiriirka ka dhexeeya cabañuelas iyo maalinta koowaad ee bisha Ogos. Laga bilaabo maalmahan waxaan ogaan karnaa ifafaalaha cimilada ee dhici doona sanadka oo dhan. Ma ahan dhammaan meelaha lagu qabto cabañuelas inay raacaan bisha Agoosto tusaale ahaan. Tusaale ahaan Koonfurta Ameerika, waxay u isticmaalaan bisha Janaayo saadaasha hawada. Dhinaca kale, Hindusku waxay adeegsadaan bilaha jiilaalka badhtamihiisa.
Astaamaha iyo qaabka saadaasha
Habka loo isticmaalo in lagu sameeyo xisaab ama ka yar sax ayaa noqon kara mid aad u adag. Waa inaad lahaataa samir kugu filan iyo xusuus wanaagsan hadii aad rabto inaad si sax ah u sameyso.
Waxaan ku bilaabaynaa sharaxaad cabañuelas ee ida. Waxay ku saabsan tahay qiimeynta 12-ka maalmood ee ugu horreeya sanadka. Waxay tahay inay noo sheegaan cimilada aan yeelan doono laba iyo tobanka bilood ee sanadka. Taasi waa, Janaayo 1 ma tilmaami doono waqtiga Janaayo, bisha labaad ee Janaayo ee Febraayo, iyo wixii la mid ah.
Dhinaca kale, iyagu waa dib u cabañuelas. Kuwaani waxay dhacayaan laga bilaabo Janaayo 13. Waxaa loo isticmaalaa in lagu saadaaliyo cimilada bilaha oo hoos u sii socota. Taasi waa, Janaayo 13 waxay noqon laheyd waqtiga Diisambar, Janaayo 15 Oktoobar, iwm. Laga bilaabo 25-ka illaa 30-ka Janaayo, waxaan ka hadlaynaa u dhiganta cimilada labadii biloodba mar. Taasi waa, Janaayo 25 waxay u taagan tahay bilaha Janaayo iyo Febraayo, 26 waxay u dhigantaa bilaha Maarso iyo Abriil, iwm.
Ka dib waxaa la qaadaa Janaayo 31 waxaana loo qaybiyaa laba saacadood oo kala-goyn ah oo u kala horreeya. Laga bilaabo 12 ilaa 2 waa bisha Diseembar, laga bilaabo 2 ilaa 4 bisha Nofeembar, iyo wixii la mid ah.
Marka bisha Janaayo ay gebi ahaanba dhaafto, cimilada mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka la qaaday ayaa la qaadaa celcelisna waa la sameeyaa. Natiijadani waxay muujin doontaa cimilada bisha su'aasha aan rabno. Tusaale ahaan, si loo saadaaliyo cimilada bisha Febraayo, waxay noqon laheyd lagama maarmaan in lagu xisaabtamo cimilada Janaayo 2 + cimilada Janaayo 23 + cimilada Janaayo 25 + jawiga Janaayo 31 inta u dhaxeysa 8 iyo 10 habeenimo .
Cabañuelas bishii Agoosto
Qaar badan oo ka mid ah habkani wuxuu umuuqdaa mid aad u dhib badan. Intaas waxaa sii dheer, ma laha adkeyn cilmiyaysan, maadaama waqtiga bisha Janaayo ama Agoosto uusan shaqo ku lahayn sanadka intiisa kale. Waxaan ka hadlaynaa dhaqammo caan ah oo la sameeyay tan iyo dadyowgii hore. Markii saadaasha hawada aan la ogeyn ama ay si dirqi ah ku dhex martay, cabañuelas wuxuu ahaa qaab wanaagsan oo saadaasha cimilada.
Waa hab xiiso leh in la sameeyo ka dibna la hubiyo, sanadka oo dhan, heerka guusha aad haysato. Waxaa sidoo kale jira cabañuelas bishii Agoosto. Qaabku waa isku mid, laakiin waxaa la sameeyaa bisha Ogos si loo saadaaliyo sanadka soo socda. Waxay ku saleysan yihiin kalandarka Zaragoza. Waxay u kala baxaan laba xilli, laga bilaabo 1-da ilaa 13-ka bisha Agoosto dhacdooyinka dhici doona labada toddobaad ee ugu horreeya bisha Janaayo illaa Diseembar, iyo Ogast 13 ilaa 24, maxaa dhici doona qeybta labaad ee sannadka.
Saadaalinta Cabañuelas ee 2018
Dadka u heellan xisaabinta cimilada iyagoo adeegsanaya habkan waxaa loo yaqaan 'cabañuelista'. Bishii Agoosto 2017, Juan Manuel de los Santos, oo ah macallin sare iyo Chemistry oo ka socda Valverde del Camino (Huelva), ayaa sharraxay saadaashiisa sanadka 2018.
Cabañuelas waxay saadaalisay sanad abaar ba'an oo ka dhici doonta sanadka 2018 iyo in si dhib yar ay jiri doonto fursad roobab inta lagu jiro maalmaha ugu horeeya bisha Janaayo. Wuxuu ka digay inay noqon doonto sanadka ugu xun ee saadaasha hawada laga hadlo. Waxay ahayd sanad dhan oo qalalan. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro bilaha sanadka 2018, roobka ayaa si dhab ah u badnaa sanadkan. Waxay gaareen xaddigaas oo Spain ay ku guuleysatay inay ka soo kabato 37% ee kaydadka illaa 72%. Taasi waa in la yiraahdo, celceliska keydadka Isbaanishku waa 72%.
Dhinaca kale, khabiir kale oo ka tirsan cabañuelas ayaa wacay Alfonso Cuenca natiijooyin aad u kala duwan. Isaga, 2018 wuxuu u noqon lahaa mid ka mid ah roobab daran. Marka midkee baa saxan? Ilaa heerkee ayay cabañuelas run tahay? Waa inaan xasuusnaano inay yihiin habab hore oo aysan haysan taageero cilmiyaysan. Sidaa darteed, saxnimadeedu waxay kuxirantahay arrimo badan.
Cabañuelas ma runbaa?
Waxay kuxirantahay qofka fuliya habka saadaasha, hal natiijo ama mid kale ayaa soo bixi doona. Waa run hadii aan qaadano saadaasha Alfonso, inay sax noqon laheyd, laakiin hadii aan xusho tan Santos, maya.
Runtu waxay tahay in cabañuelas ay si aad ah ugu sii kordhayaan maxaa yeelay nidaamyada cimiladu waa kuwo la sii saadaalin karo. Tan waxaa u sabab isbedelka cimilada. Cimilada sii kululaaneysa ayaa sii kordheysa soo noqnoqoshada iyo xoojinta abaaraha, sidaa darteed ma ahan wax aad u adag in la saadaaliyo in sanad uu qalali doono.
Sannadka 2016-2017 wuxuu cabañuelista Alfonso Cuenca saadaaliyay taas roobabku aad bay u yaraan lahaayeen. Kaliya inta lagu jiro guga iyo xilliga Easter. Sanadka intiisa kale wuxuu ahaan lahaa mid aad u qalalan. Xaaladdan oo kale, labada sanoba waxay ahaayeen kuwa ugu diirran uguna qalalan tan iyo markii roobka la duubay.
Halkan waxaan idinkaga tagnay jadwalka saadaasha ee labadan sano:
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay macluumaadka ku saabsan cabañuelas oo aad ula socoto kuwa 2019!
Haddii aad rabto inaad ogaato sida khubarada saadaasha hawadu u saadaaliyaan cimilada, halkan guji:
Sidee bay khubarada saadaasha hawadu u saadaalin karaan cimilada dhawr sano gudahood?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Cabañuelas
Goorma ayaa ah maqaal ka mid ah homeopathy?